အတ္တလန်းတာ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဘားဘာရိနီ အတ္တလန်းတာ ယခင် ရောမမြို့၊ ဘားဘာရိနီ နန်းတော်တွင်ရှိခဲ့၍ ယခု ဗာတီကန်စီးတီးတွင် တည်ရှိသည်။ inv. 2784. ဘီစီ ၁ ရာစုမှ ဂရိလက်ရာ (သို့) အေဒီ ၂ရာစုမှ ရောမတို့၏ မူပွား
အတ္တလန်းတာ (အင်္ဂလိပ်: Atalanta; ဂရိ: Ἀταλάντη Atalantē) သည် ဂရိဒဏ္ဍာရီတွင် အမျိုးသမီးသူရဲကောင်းတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူမကို လက်မထပ်လိုသော အမဲလိုက် အပျိုစဉ်တစ်ဦး၊ သူရဲကောင်း မယ်လီယေးဂါက ချစ်မြတ်နိုးရသူတစ်ဦးအဖြစ် ဖော်ပြကြသည်။
ဆူဒို-အပေါလိုဒေါရပ်စ်၏ ဘစ်ဘယီယာသီကာ စာပေအရ အတ္တလန်းတာသည် အိုင်းယဆပ်စ်နှင့် ကလစ်မစ်နီးတို့၏ သမီးဖြစ်သည်ဟုညဖော်ပြထားသည်။ မိဘတော်စပ်ပုံကို အခြားသော ဟစ်ဂျိုင်းနပ်စ၊ ဟီးဆီးယဒ် ကဲ့သို့သောသူများကလည်း ကွဲလွဲစွာဖော်ပြကြသည်။ "ဘစ်ဘလီယာသီကာ"သည်သာလျှင် သူမ၏ မွေးဖွားခြင်း၊ ကြီးပြင်းလာခြင်းတို့ကို ဖော်ပြထားသည့် စာပေဖြစ်သည်။ မင်းသား အိုင်းယဆပ်စ်သည် သားယောက်ျားလေးလိုချင်၏။ အတ္တလန်းတာကို မွေးသောအခါ ၎င်းက သမီးကို သေစေရန် တောင်ထိပ်၌ ပစ်ထားခဲ့သည်။ အချို့ပုံပြင်များက ဝက်ဝံမကြီးတစ်ကောင်က နို့ချိုတိုက်ကြွေး၍ မွေးမြူခဲ့ရာ နောက်ပိုင်း၌ မုဆိုးများက အတ္တလန်းတာကို တွေ့ရှိပြီး ကြီးပြင်းအောင် စောင့်ရှောက်ခဲ့သည်။ ဝက်ဝံတစ်ကောင်အလား တိုက်ခိုက်နိုင်ရန်၊ အမဲလိုက်နိုင်ရန် သင်ကြားလေ့လာခဲ့သည်။ နောင်တွင် ဖခင်နှင့် ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခဲ့၏။
တောရိုင်းထဲတွင် ကြီးပြင်းလာခဲ့ရသောကြောင့် သူမသည် ကြမ်းတမ်းသော အမဲလိုက်သူတစ်ဦးဖြစ်ကာ အမြဲပျော်ရွှင်တတ်သည်။ အားတစ်မစ်နတ်ဘုရားမထံသို့ အပျိုစဉ်လုပ်မည်စု ကတိသစ္စာထားခဲ့၍ စန်းတောနှစ်ဦးကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။ ယင်းစန်းတောနှစ်ဦးမှာ အဓမ္မကျင့်ရန် ကြိုးပမ်းသောကြောင့်ဖြစ်၏။
↑ In the opinion of Lempriere's Classical Dictionary, "the finest representation of Atalanta"
↑ Pseudo-Apollodorus, 3.9.2 Archived 2015-09-24 at the Wayback Machine..
↑ ATALANTA (Atalante) - Arcadian Heroine of Greek Mythology။ 2012-09-30 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Archived copy။ 2012-08-23 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2012-11-11 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အတ္တလန်းတာ&oldid=622552" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၂:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။